Ukuphelisa amanqatha ngaphandle kotyando: indlela yokunciphisa umzimba kwimozulu elungileyo | Amadoda aQinisekileyo
Xa kuqala ubushushu kwaye siqala ukunciphisa iimpahla esizinxibayo, sifumana izakhiwo malunga namanqatha esiwafumene ebusika. Abantu abaninzi bafuna ukuqala ukuphulukana namanqatha, kodwa ukutya ukutya akukhethi wonke umntu. Namhlanje kunokwenzeka ukuba susa amanqatha ngaphandle kotyando Enkosi kunyango olwahlukeneyo lomzimba. Nangona kunjalo, lunyango olukhethekileyo ekufuneka lwenziwe ziingcali abaziingcali ebaleni.
Ke ngoko, kweli nqaku sikuxelela ukuba kanjani ulahlekelwe ngamanqatha ngaphandle kotyando.
1 Indlela yokunciphisa umzimba ngaphandle kokutya
2 Susa amanqatha ngaphandle kotyando kubanda
3 I-SculpSure yokunciphisa iLaser
4 Radiofrequency yokususa amanqatha ngaphandle kotyando
Indlela yokunciphisa umzimba ngaphandle kokutya
Siyazi ukuba ukutya sisiseko sokunciphisa amanqatha emizimba yethu. Gcina ukhumbula ukuba ngaphandle kwentsilelo yeekhalori ekutyeni kwethu asisayi kuphulukana namanqatha. Olunye ukhetho kukuhamba kwaye usebenze ukwenza inkcitho yamandla ngaphezulu kwento esiyityayo ngokutya. Nangona kunjalo, Siyazi ukuba ngekhe siphulukane namanqatha asekhaya. Yimfuza yethu eya kuthi ikhethe apho unokukhetha khona amanqatha atshisayo. Kukho abantu abadla ngokugcina onke amanqatha esiswini, ngelixa abanye bewagcina emilenzeni nasemqolo.
Ukuze ulahlekelwe ngamanqatha ngaphandle kotyando, kukho iindlela ezahlukeneyo zonyango olungenasidima olunika iziphumo ezihle. Abantu abaninzi bayakucaphukela ukuhamba ngegumbi lokusebenza kwinjongo yobuhle. Oku akusafuneki njengoko kukho unyango oluthile sisebenzela ukuphelisa amanqatha omzimba ngetekhnoloji entsha. Ezinye zeetekhnoloji ezintsha ziyakwazi ukuhlasela iiseli ezinamafutha zisebenzisa ubushushu okanye ukubanda okukhulu ukuziphelisa.
Susa amanqatha ngaphandle kotyando kubanda
Gcina ukhumbula ukuba ukuze siphulukane namanqatha kunye nokutya kwisimo sezulu esifanelekileyo kufuneka sizibeke kwisandla seengcali. Ezi ngcali ziphethe ukuvavanya imeko yethu kwaye zikhangele eyona ndlela isebenzayo yokulahleka kwamafutha. Susa amanqatha ngaphandle kotyando Kule mihla kunokwenzeka ukuba ubulele kunyango lokunciphisa amanqatha ngokubanda okuthatha malunga neyure ngeseshoni nganye. Ngeli lixa isiguli siphumle ngokupheleleyo kwaye kungabikho kuphazamiseka. Itekhnoloji yokupholisa eqhubayo enceda ngokukhetha ukususa iiseli ezinamanqatha emzimbeni.
Ukuba siqokelele amanqatha esiswini, ugxininiso lunokubekwa kule ndawo ukuphelisa ezi seli zityebileyo. Inkqubo yeyendalo ngokupheleleyo kwaye ngokuthe ngcembe ukuze ingonakalisi ulusu. Ngaloo nto, Amafutha asekhaya ancitshisiwe ngaphandle kotyando ngokufaka uxinzelelo kumatshini oza kunyangwa. Ngale ndlela, ityhila iiseli ezinamanqatha ngokuchanekileyo ukupholisa okulawulwayo okuphelisa ukubasusa.
I-SculpSure yokunciphisa iLaser
Enye indlela yokususa amanqatha ngaphandle kotyando. Lunyango lwamanqatha ngobushushu kwaye lwenziwa enkosi kwi-SculpSure yokunciphisa i-laser. Iseshoni nganye ihlala malunga nemizuzu engama-25 kummandla ngamnye. Abanye bathi le ndlela iyacaphukisa kunale yangaphambili apho yayinyangwa ngengqele. Nangona olu nyango lunokucaphukisa ngakumbi, kukho iimeko zezigulana ezinganyamezelaniyo nesiphumo sokutsala esenziwa kunyango olubandayo.
Zonke ezi zizathu zanele ukuba kuvavanyo lomzimba kuGqirha kuba kubalulekile ukujonga umqobo weentlungu izigulana ezinokuthi zifumane olona nyango lulungileyo. Ukunciphisa umzimba ngokupheleleyo, ukuphelisa ukubamba uthando okucaphukisayo kunye nokunciphisa isisu ngaphandle kotyando kunokwenzeka ngezi ndlela.
Radiofrequency yokususa amanqatha ngaphandle kotyando
Ukuhamba rhoqo kunomathotholo lolunye lonyango olusetyenzisiweyo ukunciphisa umzimba ngaphandle kotyando. Kule meko, iqela lezonyango linoxanduva lokusebenzisa amaza aphakamileyo ukuze ube neziphumo ezingcono nezikhawulezayo. Enye yezinto eziphambili zokunyanga abaguli abafuna ukususa amanqatha ngaphandle kotyando sisantya. Ngokukhawuleza xa abaguli beqala ukubona iziphumo ngokukhawuleza, baqala ukoneliseka kwasekuqaleni kunyango.
Radiofrequency isebenza ngokubangela ukufudumeza okulawulwayo kwesikhumba okuthanda umjelo wamanzi we-lymphatic womzimba. Oku kuthetha ukuba ulwelo luya kulahleka kwangoko kakhulu kwaye ukusasazwa kuyo yonke indawo kuqala ukuphucula. Ndiyabulela koku, ukubonakala kwesikhumba kunikwe mna kwaye injongo yokunciphisa amafutha emzimbeni iyaququzelelwa.
Uncedo oluya nalo lonke olu nyango kukuba awuyi kuphelisa amanqatha omzimba ngendlela ehlaselayo emzimbeni wakho. Ukutya ukutya okusempilweni kunye nokuzilolonga Yinto ekufanele ukuba ibe kuyo yonke imikhwa yabantu yemihla ngemihla. Nangona kunjalo, ukuba injongo yakho iyinto yobuhle kwaye awunasifo nasiphi na isifo, ngolu nyango unokunceda ekupheliseni amanqatha omzimba ngokukhawuleza kwaye ungonakalisi umzimba wakho.
Kufuneka ubandakanye le mikhwa iqhelekileyo ekutyeni kwakho kancinane ukuze uphele uqhela umzimba. Nje ukuba usebenzise ezi teknoloji ukulahla amanqatha kunye nemikhwa esempilweni unokufikelela kwimpilo entle.
Ndiyathemba ukuba ngolu lwazi unokufunda ngakumbi malunga nokuphelisa amanqatha ngaphandle kotyando.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Amadoda aQinisekileyo » Ukunyamekela » Indlela yokunciphisa umzimba ngaphandle kokutya ngaphambi kokuba kufike imozulu elungileyo
Usetyenziso lokuthenga iimpahla